Atirishooyinka Bollywoodka Katirsan Oo Qaliin Wajiga Ah Mareen Quruxda U Jeedid Foolxuma Ka Horeysay Qeybtii 2aad (+Sawiro) – Filimside.net
Atirishooyinka Bollywoodka Katirsan Oo Qaliin Wajiga Ah Mareen Quruxda U Jeedid Foolxuma Ka Horeysay Qeybtii 2aad (+Sawiro)
Atirishooyinka Bollywoodka iyo dumarka kale ee kasoo jeedan dalka India waxaa lagu tilmaama hablaha ugu quruxda badan aduunka marka lala bar bar dhigo dumarka kale ee daafaha caalamka.
Hadaba quruxda waxaa loo qeybiyaa laba qeybood oo ah mid udhalasho ah iyo mid la iska keenay waxaana ugu wanaagsan tan u dhalashada ah.
Dunidan maanta aan joogno waxyaabo badan ayee dadka sameyaan waxaad arkeysaa qof markuu yaraa aad u foolxuma badnaa mudo kadibna qurux badan halka qofkale qurux badanaa mudo kadibna foolxuma noqonaayo waxaana taas sabab u ah waqtiga, daawo la is mariyo iyo waliba qaliin lamaro.
Waxaan idiin heynaa atirishooyinka Bollywoodka kuwooda qaliinka wajiga ah hada kahor mareen sido kalena qaar kamid ah waxay ka dhaxleen qurux oo muuqaalkoda hore mid ka wanaagsan ayee qaliinkas ku heleen halka kuwa kalena foolxuma ka dhaxleen muuqaalkodi hore ee quruxda badnaana waayen.
Fadlan Hoos Kaga Bogo Maqaalka Qeybtiisa Labaad Iyo Sawirada Aad Ku Kala Garan Karto:
Aishwary Rai Bachchan:
Quruleyda Bollywoodka AIshwarya Rai Bachchan waxay soo martay qaliin dhanka wajiga ah sida bishimaha, sanka iyo waliba afka sida sawirka aad ka arki kartin.
Nargis Fakhri waa mid kamid ah atirishooyinka dhalinta ah ee ay Bollywoodka heystaan sido kalena dooneysa inee maqaam weyn ka gaarto fanka.
Xidigtaa guud ahaan wajiged ayee is bedel kusameysay iyadoo qaliin dhanka wajiga ah martay sida sawirka idiin kaga muuqdo muuqaalkeda rasmiga ah ee hadeer wa sawirka dhanka bidix kaajira halka kii horena yahay kan midig kaajira.
Aditi waxay qaliin ku sameysay sankeda shalay iyo maantana farqi weyna u dhaxeya….
Qruuxleyda Katrina Kaif malaha muuqaalkeda hore aye aad ugu qurux badned fikir ahaanteyda sida sawirka aad ka arki kartid farqiyada u dhaxeya.
Waxaa in badan la isla dhexmaraayey in xidigtaan qaliin dhanka wajiga ah martay inkastoo Katrina si rasmi ah asyan shaaca oga qaadin hadan adiga ayaaba ka garan kara faqriyada udhaxeya sawiradan.
Atirishada muranka usaaxiibka ah shaki kuma jiro in guud ahaan wajigeda ay qaliin kusameysa sido kalena muqaa qurux badan ay maanta kasoo saartay.
Xitaa labadan sawir waxaa muqaal ahaan kasii wanaagsan muuqaal ay saacan leedahay waayo sawirada waa kuwa hore sidaa awed Kanagana halmar kabadan ayee martay qaliin dhanka wajiga ah.
Gabadhii filmkii Kya Kehna, Kal Ho Na Ho, Veer Zaara iyo kuwa kale nooga yaabsatay Preity Zinta waa mid kamid ah atirishooyinka ugu qaab jiliinka wanaagsan Bollywoodka.
Xidigtaan waxay martay qaliin dhanka sanka iyo bishimaha ah muqaal ahaan nooc kale ayee iska dhigtay.
Gauri Khan waa xaaska Bollywood King Khan aka Shah Rukh khan gabadhan markii hore waxay kamid ahed gabdhaha ugu quruxda badan Bollywoodka inkasto aysan atirisho ahen hadana qeyb kamid ah Bollywoodka waaye maadama ay qarash gareye iyo Model isku tahay.
Hadaba Gauri maanta waxay ka shalaaynesa qaliinki dhanka wajiga ahaa ee ay kusameysay quruxdedi hore waxaana cadeyn ku ah sawiradan sare kaaga muuqdan…..
Hadaba Akhriste Xidigaha Aan Idiin La Wadaagnay Ee Qaliinka Wajiga Ah Maray Yaa Ku Qasaaray Yaase Ku Faaiday?
Wuu Socdaa Maqaalka……………..
Waxaa Aqrisay 799